Nchịkọta Archicad, ihe ọzọ na AutoCAD
Onye bụbu onye isi Bentley ga-eduga ụlọ ọrụ na-esote usoro ọganihu; Viktor Várkonyi, onye isi oche GRAPHISOFT na-apụ apụ ka ọ bụrụ onye isi Nhazi na Nhazi nke Nemetschek Group. BUDAPEST, Machị 29, 2019 - GRAPHISOFT®, onye na - eweta ụzọ maka sọftụwia maka iwulite ihe owuwu ụlọ ozi na ndị nrụpụta ihe,…
Fileinfo.net bụ saịtị na-anakọta ndọtị faịlụ, mee ka ha kee ha site n'ụdị ngwa yana mmemme sitere na Windows na Mac nwere ike imeghe ya. Nwere ike ime nyocha ọfụma, dịka .dwg, ma ọ bụ kwa site na ụdị faịlị, dịka ọmụmaatụ "CAD". Nke a bụ nsonaazụ enwetara mgbe ịhọrọ ...
Ndị na-agụ akwụkwọ AutoDesk na-achọpụta faịlụ
Tupu ọ dị na ụlọ nyocha, mana ugbu a, ahapụla ya dịka ngwaahịa gụsịrị akwụkwọ; bụ ihe nchọgharị faịlụ ahụ. http://seek.autodesk.com/ Enwere ike iji ya maka ọtụtụ ebumnuche gụnyere ịchọta mgbochi, ihe 3D, ihe BIM na nke kachasị mma, enwere ike chọọ ya na usoro ndị a: .dwg (AutoCAD) .dwf ( AutoCAD) .dgn (Microstation) .dxf (Dọchị ...
Obi ụtọ 29 nke February, nchịkọta nke ọnwa
Ọgwụgwụ nke ọnwa dị mkpumkpu mana itu. Nke a bụ nchịkọta nke ihe edepụtara na ụbọchị 29 siri ike n'etiti njem na ọrụ ... Enwere m olileanya na Machị ka mma. Aghụghọ maka eserese na-atọghata njikwa UTM na geographical na Excel Gbanwee site na Geographical to UTM na Excel Otu esi emepụta uzo ichikota otu esi agbanwe ntughari nke ...
blog ESRI Google Earth manifold GIS My egeomates
ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Internet na Blogs, ọtụtụ
Template a na-eme ka ọ dị mfe ịtụgharị nhazi ala na ogo, nkeji, na sekọnd ka nhazi UTM. 1. Otu esi abanye data ahụ A ghaghị ịhazi data ahụ na mpempe akwụkwọ Excel, n'ụzọ ọ ga-abịa na usoro achọrọ. N'ezie, a ghaghị ịkwanyere mmachi nkịtị banyere usoro nke ụkpụrụ ndị a nabatara ...
ArchiCAD, software CAD n'efu maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi
ArchiCAD bụ ikpo okwu CAD nke dị adị n'ahịa ruo ogologo oge, ọ bụ ezie na mbido ọ bụ nsụgharị maka Mac, ọ bụ ruo 1987 ka amaara mbipute 3.1. Ọ bụrụ n’icheta, ArchiCAD 3.1 na-asọ mpi megide AutoCAD 2.6 na 1987, dịka DataCAD na DrawBase mere, mana ọ bụ afọ ikpeazụ ha nwere ...